I-China Lab ultrasonic probe sonicator Ukukhiqiza neFektri | Precision Hangzhou
Elebhu, i-ultrasonic probe sonicator ivamise ukusetshenziselwa ukuphazanyiswa kwamaseli, ukusheshiswa kokuphendulwa kwamakhemikhali, ukwehliswa kwezinhlayiyana, ukukhishwa kwengxenye, njll. I-sonicator ye-ultrasonic probe i-JH ifakwe ukuhlakanipha kwamandla kagesi we-CNC, ukukhishwa kwe-amplitude kunembile, futhi amandla angashintshwa. Ifanele izinhlobo ezahlukene zeziphuzo. Amandla amakhulu angafika ku-1500W, futhi angakwazi ukubhekana kalula namanzi amaningi.
Imodeli I-JH500W-20 I-JH1000W-20 UJH1500W-20
Amandla 500W 1000W 1500W
Amandla wokufaka 220 / 110V, 50 / 60Hz
Amandla ashintshekayo 50 ~ 100% 20 ~ 100%
Hlola ngobubanzi 12 / 16mm 16 / 20mm 30 / 40mm
Impahla yophondo Ingxubevange yeTitanium
Ububanzi beShell 70mm 70mm 70mm
Flange ubukhulu / 76mm
Uphondo Ubude 135mm 195mm 185mm
I-Gneerator Idijithali yedijithali enokulandelwa kwemvamisa okuzenzakalelayo.
Icubungula umthamo 100 ~ 1000ml 100 ~ 2500ml 100 ~ 3000ml
Izinto ≤4300cP 0006000cP 0006000cP
1.Q: Ingabe ukwelashwa kwe-ultrasonic kunomphumela kuze kube nini?
A: Iziphuzo ezahlukahlukene zinezikhathi zokwelashwa ezihlukile, futhi uketshezi oluningi luzoveza imiphumela kungakapheli uhhafu wehora.
2.Q: Ngingayikhulisa ngqo imiphumela yokuhlola kuzinhlelo zokusebenza zezimboni ngokuphindaphindwayo?
A: Ngokombono, kungenzeka. Enqubeni yangempela yezimboni, amandla angalahleka. Ungasitshela izidingo zakho. Onjiniyela bethu bazokwenzela uhlelo olunengqondo kunazo zonke ngokuya ngesimo sangempela sezimboni ezahlukahlukene.
I-3.Q: Ingabe le divayisi ingafakelwa izimpondo eziningi ezinobukhulu obuhlukile, futhi ingashintshwa ngokuthanda?
IMP: Akunconywa ukwenza lokhu ngaphandle kokuholwa nguchwepheshe.
4.Q: Ngingayiqasha yini le mishini?
IMP: Yiqiniso, okokuqala, ukhokha inani eligcwele. Sizokuthumela imishini kuwe. Kusukela ngesikhathi uthola okokusebenza, uzokhokhiswa u- $ 30 ngosuku. Sazise ngemuva kwesivivinyo sakho bese uthumela idivayisi emuva kwezinsuku ezingu-3 ngemuva kwesaziso. Umnqamulajuqu wokukhokha usuku osazisa ngalo. Ngemuva kokuthola okokusebenza futhi sihlole ukuthi akunankinga yini, intela nempahla zizodonswa enkokhelweni yakho bese imali eyeqile izobuyiselwa kuwe.
5.Q: Ungayamukela i-OEM? Ngingaba yi-ejenti yakho?
A: Impela. I-MOQ ye-OEM ne-ejenti amasethi ayi-10. Intengo yomenzeli izothunyelwa kuwe ngendlela yedokhumende.
Langaphambilini i-ultrasonic insangu kawoyela emulsification yedivayisi ye-nano-emulsion
Olandelayo: Isisetshenziswa se-Ultrasonic liquid processing
I-1000w Laboratory Ultrasonic Sonicator
1500w Laboratory Ultrasonic Sonicator
500w Laboratory Ultrasonic Sonicator
I-Sonicator ye-Ultrasonic Yelebhu